नाममा के छ र ! | Hamro Patro
MARCH 21, 2013 / LENDAAI
माघको कठ्याङ्ग्रिने चिसो । चिसोमा झनै चिसियो मन,
समीरले कानैमा आएर फुस्फुसायो, “राधिकालाई त शिवेले लाने भो, तँ हेर्दाहेर्दै गइस् खोलैखोला ।”
“हँ? के भन्छस् बे ? फुस्किस् ?”
“हो बे हो, शिवे र राधिका आज सँगै कलेज आए बिहान ।”
“हात समा’थे ?”
“हात त समा’थेनन् तर खुप मस्क्या’थे बाटामा । बरु सक्चस् भने आजै दे चिठी, नत्र शिवेले जिप्टायो, स्योर !”
गोजीभित्र बडो जतनले पट्याएर राखेको चिठीले भत्भती पोल्न थाल्यो । चिठीका अक्षरले पालैपालो घोच्न थाले । रातभरि बसेर कनिकुथी लेखेको दुई पेजको चिठी समीरको समाचारले फतक्कै गल्यो, शित परेपछि ओइलाएको कागजझैं ।
समीरले मलाई त्यस्तो दर्दनाक र भयंकर खबर सुनाएको थियो, जसले छिनभरमै मेरो सास लैजान सक्थ्यो वा निमेषमै भावशून्य भएर मैले तुरुक्क आँसु खसाल्न सक्थें । रुम् कि नरुम्, रुम् कि नरुम् भयो ।
तर, समीरकै कुराले आँसु खसालिहाल्नु अघि बीस पटक सोच्नुपथ्र्यो । बेफ्वाँकका खबर सुनाएर मान्छे रुवाउँदै हिँड्ने र पछि रामधुलाइ भेटेर आफैं रुँदै हिँड्ने मान्छे थियो ऊ । ‘तेरी स्वास्नी पोइल गई’ भनेर उसले थुप्रैका हातबाट थुतुनो सुन्नाएको थियो । टोलका प्रायः लोग्नेमान्छेले उसलाई धेरैपटक धोइसकेका थिए । कतिपटक त नांगै पारेर ।
पेच हल्का ढिला भए पनि ऊ हाम्रो ग्याङको भरपर्दो र जंगी थियो । हामी तीन-चार जनाबाहेक अरु सबै ऊसँग कुनै न कुनै कारणले बिच्किएका थिए । किनकि उसले सुनाएका ९८ प्रतिशत खबर कि त हावा हुन्थे, कि त हावाका झोंक्का ।
अब राधिकालाई शिवेले लान्छ भन्ने समीरको खबर म कसरी पत्याऊँ ?
आत्मविश्वासका साथ भनें, “अनि शिवेले त ह्याप्दिसकें भन्थ्यो त अस्ति ?”
“नापेर ह्याप्थ्यो ! मैले मेरै आँखाले देखेको ।” उसले थप्यो, “स्याला, शिवेका पो गरदशा चम्क्या रैछन् यसपालि !”
कालो अनुहार झन् कालो भयो, “धड्कनजस्तै त हुन्न बड्डा ?”
समीर बडो घत लाग्नेगरी हाँस्यो, “हेर्दाहेर्दै तँ सुनील सेट्ठी भइस् बे ।”
“दाइ, त्यस्तो कुरा नगर् यार, मुटुमा गाँठो पर्‍यो ।”
ऊ झनै हाँस्यो ।
“के गरुँ यार ? मर्छु कि के हो ?” मेरो कलेजो भित्रभित्रै कताकता बटारियो ।
“हाहाहा, नमर् नमर् । त्यो शिवेलाई तह लाउनपर्छ पैला ।”
“कसरी लाउनी तह ?”
“सब कुरा मलाई छाड्दे, बरु हिँड् चाउमिन ख्वा ।”
समीरको चाउमिन खाने दाउ हो कि जस्तो पनि लाग्यो । भर परिहाल्ने मान्छे थिएन, खाजा खान जस्तोसुकै नाटक पनि गर्न सक्थ्यो । उसले मात्रै खायो चाउमिन, मेरो मनले खान सकेन । छाति गह्रुंगो भएपछि त सास फेर्न पनि मन नहुँदो रहेछ !
खाइवरी निस्किने बेलामा उसले भन्यो, “नडरा नडरा ! राधिका तेरै हो, तेरै हुन्छे । त्यो शिवे त्यसै फन्किएर हुन्छ ?”
स्याला, मन त गुलाफको बगैंचामाथि फिँजाएजस्तो पो भयो एकैछिनमा । खस्न लागेका आँसु पनि पिलित्त भित्र गए ।
“माकसम, नडरा ।”
मैले चिठी च्यातें र संकल्प गरें, “जे भए पनि मुखैअगाडि गएर भन्छु अब, यस्ता चिठीसिठीको भर हुन्न !”
हिन्दी फिलिम ‘धड्कन’ को ट्रेलर आएदेखि नै कलेजमा साथीहरूले हाम्रो कित्ता काटे-
कालो भएकोले म सुनील सेट्ठी, राधिका हिरोइन नै भई शिल्पा सेट्ठी र, हर्लक्क बढेको खाइलाग्दो शिवे, अक्षय कुमार ।
मलाई लाग्थ्यो- हिरोनी त आखिर सुनीलकै हो ।
प्रायः हरेक दिन कलेजमा मेरो र राधिकाको कुरा चल्थ्यो । राधिका शिल्पा हुन्थी, म सुनील । ‘तुम दिल की धड्कनमें” गीतमा धेरैपटक राधिका र म नाच्यौं हर्नोकको डाँडोमा पुगेर । ऊ कम्मर मर्काउँथी, म भुतुक्क हुन्थें । मनमा हुन्डरी चल्थ्यो, मुटु बेस्सरी धड्किन्थ्यो । हाम्रा वरिपरि २५-३० जना केटा-केटीहरू झुम्म परेर नाच्थे, चारैतिर गीत बज्थ्यो । चराहरू हाँगामा बसेर गीतको भाकामा रमाउँथे, कतिकतिखेर भुर्र उड्थे । अलि पल्तिर खोला बग्थ्यो आफ्नै गतिमा ।
अनि कताकताबाट दौडिँदै आउँथ्यो शिवे र एकाएक बन्द गथ्र्यो गीत । म झल्यास्स हुन्थें ।
हरेक दिन हर्नोकको डाँडोमा कम्मर मर्काउँदा-मर्काउँदा राधिका पूर्णरूपमा मेरी भइसकेकी थिई । कक्षाबाहेक हरेक क्षण ऊ मसँग हुन्थी, मसँग हिँड्थी, मसँगै खान्थी । कलेज जाँदा, फर्किंदा मेरै दायाँ कुममा हात राख्थी । ऊ मेरो घरमा आउँथी, म उसको घरमा जान्थें । मेरी आमासँग बसेर लुगा धुन्थी, भाँडा माझ्थी, तरकारी काटिदिन्थी । कहिलेकाहीँ मेरो हरियो एटलस साइकलमा बसेर गाउँ डुल्थी ।
मलाई थाहा थियो- मसँग गर्ने व्यवहार राधिकाले शिवेसँग पनि गर्छे ।
राधिकाले उसको घर गएर पनि लुगा धोइसकेकी थिई, तरकारी काटिसकेकी थिई । जीवेको हिरोहोन्डा स्प्लेन्डरमा बसेर उसले गाउँमात्रै होइन, सिंगो देश घुमेकी थिई । उसको बाइकअघि मेरो हरियो एटलस कताकता दुब्लो र मरन्च्याँसे देखिन्थ्यो, सुकेको सिमल रुखझैं ।
त्यसैले मनमा एउटा डर थियो, ‘धड्कन’ मा शिल्पा सेट्ठीलाई अक्षय कुमारले जसरी उछिट्टायो, शिवेले राधिकालाई त्यसैगरी लैजान्छ । म बर्बाद हुन्छु ।
शिवे र म राधिकाका ‘दिवाना’ थियौं, त्यो उसलाई पत्तो थिएन । पालैपालो शिवेको बाइक र मेरो साइकलमा घुम्दा पनि उसले कहिल्यै खबर पाइन ।
त्यसैले लाग्यो, शिवेले भन्दा अगाडि मैले जसरी पनि राधिकालाई भन्नुपर्छ । तर आँट थिएन । एकपटक फोन गरेर ‘आई लभ यु’ भन्ने १० कक्षाको प्रकाश (गुप्ता)लाई राधिकाले धोइसकेकी थिई । “एक त मभन्दा नि फुच्चे, त्यैमाथि घरमा फोन गरेर आई लभ यु भन्छस् ?” भन्दै राधिकाले तेलले लरक्क वायाँतिर फर्काएको प्रकाशको कपाल गोडेर चौरमै पछारेको मैले देखको थिएँ । त्यस दिनदेखि राधिकाले मेरो हंश लगी ।
कलेज छुट्टी भएपछि एकदिन समीरले उक्सायो, “आँटी छोरालाई बाघले खान्न, जा गएर भनिहाल् । यही मौका हो ।”
हो त ! डराएर पनि के लभ गर्नु !
जुरुक्क उठें ।
राधिका अरु साथीभन्दा पछि थिई । घुँडाघुँडासम्म आउने फ्रक लगाएर हिँडेको असाध्यै सुहाउँथ्यो उसलाई । भर्खर पुसमा १८ टेकेकी, त्यसमाथि ज्यान पनि भगवान्ले टाइम लिएरै बनाएको जस्तो । अझ गफिएर हाँस्दा म झनै खुत्रुक्कै हुन्थें ।
“ओए राधिका, सुन् न ।”
ऊ फरक्क पछाडि फर्की र भनी, “अँ, भन् ।”
मुटु ढक्क फुल्यो । चिटचिट पसिना आए ।
भित्रै कताकताबाट एकाएक सुलुलु बग्दै आए शब्दहरू- “तँलाई मन पराउँछु यार ।”
तर घाँटीमै आएर ठ्याप्प अड्किए ।
“श्याम सरको नोट दे न !”
मुसुक्क हाँस्दै ब्यागबाट कापी निकालेर दिई ।
थरथर थरथर काँपेका हातले च्याप्प कापी समाएर झोलामा हालें ।
एकमन सोचें- “अहँ ! ज्यान गए सक्दिनँ अब, शिवेले नै लगोस् बरु ।”
शिवे र मबीच अलिखित सम्झौता भएको थियो, “जसले सक्छ, उसैले राधिकालाई लान्छ ।”
मैले राधिकासँग घरजमकै योजना नबनाए पनि हर्नोकको डाँडोमा घाम तापेर सँगै सुन्तला खाएको सपना भने देखेको थिएँ ।
अलि पर समीर उफ्रीउफ्री हाँस्दै थियो ।
“दाइ, सकिनँ यार ! मर्चु कि के हो ! बरु तैंले भन्दे न !”
म निकै सकस परेझैं बोलिरहेको थिएँ ।
“ह्या ऽऽ ऽऽ नडरा के ! कुमारेले मिलाउँछ सब् कुरा, पख् ।”
लभसभको कुरामा कुमार अनुभवी थियो । भर्खरै उसले हाम्रै कक्षाकी यमुनालाई घुमाउन थालेको थियो ।
दौडिदै कुमारलाई लिएर आएर समीरले उसलाई सबै वृतान्त सुनायो ।
मैले थपें, “मुखेन्जी भन्न सकिएन, चिठी लेखम् त ?”
ऊ कड्किएर बोल्यो, “ह्या ऽऽ ऽऽ, यो चिठीसिठीको चक्कर छोड्, बरु हात चिर् । चिरेको देखेसि केटीहरू खुत्रुक्कै हुन्छन्,” कुमारले आफ्नो वायाँ हात देखाउँदै भन्यो, “यी, मैले नि चिरेर यमुनालाई पटाएँ, थाहा छ नि ?”
एकाएक हात चिर्ने कुराले मुटु ढुक्क फुल्यो । सुइँ लगाउँदा त सास अड्किन्छ, हात कसरी चिर्नू ?
कुमारले कलेजका आधाउधी केटाहरूको देव्रे हात चिराएको थियो । तीमध्ये धेरैको फलिफाप भएको नि थाहा थियो ।
“सुरुमा हल्का चसक्क हुन्छ, मनमनै राधिकालाई सम्झेस् क्यै हुन्न ।”
कुमारको कुराले आँट आयो । त्यही रात टोपाज ब्लेडले वायाँ हातमा ‘आर’ लेखें । घरमा देख्छन् भनेर ह्यान्डीप्लास्ट लगाएँ । घाउ चहराए पनि मन पुलुक्क थियो । अब राधिका मेरी भई, शिवे सिवे भाँडमे जाऊन् ।
हात त चिरियो, राधिकालाई देखाउने कसरी ? सर्टको बाहुला माथि सारुँ भने अरु सबैले देख्लान् र गिज्याउलान् भन्ने डर, बाहुला नसारुँ त त्यत्रो कष्टले लेखेको नाम खेर जाने डर । सीधै गएर हात देखाउन पनि भएन !
कक्षाका एकातिर केटीहरू बस्थे, अर्कातिर केटा । राधिका तेस्रो लहरको सबैभन्दा छेउमा बस्थी । प्रायः सबैका आ­­-आफ्ना सिट हुन्थे, म छैटौं लहरमा बस्थें । तेस्रो लहरसम्म पुग्नु सबैभन्दा महाभारत थियो किनकि त्यही लहरमा शिवे बस्थ्यो । मैले हात चिरिसकेको कुरा शिवेलाई पत्तो थिएन ।
शिवेलाई भनें, “दाइ, पछाडि बस्दा खासै सुनिएन यार, श्याम सरको क्लासमा म तेरो सिटमा बस्छु है ?”
उसले मानेन ।
“दाइ, प्लिज यार । श्याम सरको क्लासपछि फेरि पछाडि बस्छु के । दे न !”
ऊ अझै मानेन ।
कानैमा गएर फुस्फुसाएँ, “राधिकालाई लगेस् के बरु तैंले, दे न !”
पुलुक्क मतिर हेरेर ङिच्च हाँस्यो, “साले !”
ऊ उठेर मेरो सिटमा गयो, म उसकोमा । मैले घोसेमुन्टो लगाएर किताब हेरेको बहानामा मेरो दायाँपट्टकिो अर्को लहरमा बसेकी राधिकातिर छड्के हान्थें, ऊ आफ्नै कापीको संसारमा थिई ।
बिस्तारै वायाँ हातको बाहुला माथि सार्दै गएँ । अलिअलि गर्दा ‘आर’को टुप्पो देखियो । अझै माथि सारें­- आधा ‘आर’ देखियो । तर, अहँ ! राधिकाले आँखै लगाइन ।
श्याम सरको क्लास सकिनै लाग्दा पुलुक्क हेरी, मेरो हातको ‘आर’ । मुसुक्क हाँसी, म पनि हाँसें । हाँस्दै चिर्कटोमा केही लेखेर मतिर फुत्त फाली ।
म कालोनीलो भएँ । यति छिटै जवाफ आउला भनेर कहिल्यै चिताएको थिइनँ । यति सजिलै पनि कसैको लभ पर्दो रहेछ ! मान्छेहरू किन मरिहत्ते गरेका ?
अनि एकै रिलमा फ्ल्यासब्याकझैं सुरुदेखिका सबै सिन घुम्न थाले- स्वार्र्र …. ढ्याक्क ।
राधिकाको चिर्कटो समाएपछि हात थर्थरी काँपे, मुटुको गति एक्कासि बढ्यो । श्याम सर कताकता नेपथ्यमा कराइरहेको जस्तो लाग्यो । एन्टन चेकोभको ‘अबाउट लभ’बारे उनले के भनिराखेका थिए, केही सुनिनँ ।
किताबको बीचमा चिर्कटो राखेर हेरें । मुटु झनै धड्कियो । छेउछाउ सबै अँध्यारो भयो । शरीरभरि काँडैकाँडा उमि्रए । कन्चटमा पसिना रसाए ।
त्यहाँ त्यस्तो चिज लेखिएको थियो, जुन मेरो अड्कल, अन्दाज र आशाभन्दा कोसौं टाढा थियो ।
“रञ्जितालाई मन पराउँछस् तैले ? काले, छुपारुस्तम ।”
म सपनाको वायुपंखी घोडाबाट सीधै भुइँमा खसें, जसरी कुनै कथामा इकारस खसेको थियो ।
“हैन, आर भनेको राधिका हो, तँ होस् ।”
फेरि घाँटीमै आएर अड्कियो सास ।
मेरो लभस्टोरीको पहिलो असफल अध्याय कलेजभरि गसिप बन्यो । समीरले सबैलाई भनेर मरेछ । अझ हात चिरेको कुरा सबैभन्दा बढी चर्चित भयो । जसले भेट्थे, हात देखाउन भन्थे । म मरेजस्तो हुन्थें । कतिपयलाई बंगारा झार्ने धम्की दिएर तह लगाउँथें, कसैसँग आफैं तर्किन्थें । तर, जब श्याम सर अघि पर्नुभो, मुटु हर्ल्याकहुर्लुक गर्दै घुँडासम्म आयो ।
श्याम सरको व्यक्तित्व रहरलाग्दो थियो । अंग्रेजीमा राम्रो दख्खल राख्नुहुन्थ्यो र प्लस टुको पि्रन्सिपल पनि । उहाँले आक्कलझुक्कल पत्रिकामा मेरो नाम देखेर धेरैपटक काँध थपथपाउनु भएको थियो । साहित्य पढाउने भएकाले मप्रति उहाँको अलि बढी ‘निगाह’ थियो । कहिल्यै नराम्रो वचन लगाउनुहुन्थेन तर उहाँलाई देख्दै हामी कायल हुन्थ्यौं । आज उहाँका अगाडि म नुन खाएको भालेझैं थिएँ ।
“मिस्टर बञ्जाडे, यु आर बिइङ मिस्चिभियस,” श्याम सरले अंग्रेजीमा थर्काउनुभो, “आई विल नट टोलरेट दिस् फ्रम नाउ अन । डिड यु गेट मी ?”
“एस सर,” मैले भनें, “आई एम सरी सर ।”
“सरी भन्छ मुला,” उहाँ जंगिनुभो, “तँबाट मैले यस्तो अपेक्षा गरिको थिइनँ केटा । खै हात देखा !”
मैले सुलुक्क हात तेर्स्याएँ । ‘आर’ देखेर एकपटक भित्रभित्रै काउकुती लागेझैं मुस्काउनु भो ।
“को हो यो आर भन्ने ?”
के बोल्नु, कसरी बोल्नु ! अनुहार भुइँतिर थियो । केही बोलिनँ ।
“को हो भनेको सुनिनस् ?”
“र…. र… राधिका हो, सर,” हड्बडाउँदै भनें, “सरी सर, दिस वन्ट ह्याप्पेन अगेन ।”
“मुला, चिठी लेख्न सकिनस् ? हात चिर्नपर्ने तँलाई ? त्यत्रो मुटु छ तेरो ?”
छ भनूँ कि छैन भनूँ ? हात चिरेकै थिएँ ब्लेडले, तुरुक्क रगत झरेकै थियो ।
“तँ राम्रो विद्यार्थी होस्, हरिजीले मसँग तेरो बारेमा जेजस्ता कुरा गरे पनि तँभित्र मैले केही देखेको छु । कविता लेख्छस्, कहिलेकाहीँ लघुकथा नि लेख्छस्, मलाई राम्रो लाग्छ । ‘युगबोध’मा तेरो नाम देख्दा मैले स्टाफहरूलाई देखाएको छु धेरैपटक, तैंले यस्तो गर्ने ? मेरो अनुहार सम्झिइनस् एकपटक पनि ?”
श्याम सरको डर र मायाले मेरा आँखा रसाए । गाली त सहन्थें तर श्याम सरले इमोसनली ब्ल्याकमेल गर्नुभो, म लल्याकलुलुक भएँ । लाज र लघुताभाषले घोप्टो परेका आँखाबाट तुरुक्क आँसु झरे, जसरी ब्लेडले चिर्दा हातबाट रगत झरेको थियो ।
यसको दुई दिनपछि नै श्याम सरका अर्ती धानको भुसमा पोलें र सबैलाई बाँडेर खाएँ । राधिका झन्पछि झन् मनमा टाँसिदै गई । ऊ अझै पनि हरेक दिन मेरो घरमा आमासँग तरकारी काटिरहन्थी, रातो धोती लगाएर । ऊ अझै पनि आमालाई सघाउँदै भाँडा मस्काइदिन्थी । कहिलेकाहीँ हरियो एटलस साइकलको पछाडि बसेर बाह्रकुने र चौघेरातिर घुमिरहन्थी । कलेज जाँदा आउँदा मेरो कुममा हात राखिरहन्थी ।
सोचें, अब यसरी भएन । हाम्रो लभगुरु कुमारले कुनै जुक्ति निकाल्थ्यो कि ?
सोधें, “कुमारे, के गरुँ यार, म त भोकभोकै बसेर मर्चु कि के हो । अरु कुनै उपाय छैन ? हात चिरेको खेरै गो । कलेजभरि बेजत भो, श्याम सरले हकार्नु भो ।”
कुमार धेरै बेरसम्म बोलेन । दुई हप्ता नहुँदै यमुनासँग ब्रेकअप भएकोले ऊ पनि मभन्दा कम वेदनामा थिएन । उसको हातको ‘वाई’ पनि खेर गएको थियो । तर पनि उसको अनुहारमा तुष थिएन, सधैंझैं लाली भरिएको कान्तिमय अनुहार ।
“पख्, भ्यालेन्टाइन्स डे आउन ला’छ, त्यो दिनाँ कार्ड दिनी हो भने फेल खान्न रे !” उसले आशा देखायो, “मैले पनि शर्मिलालाई दिनी हुँ कार्ड । अनि साँच्चै, राधिकाले त अस्ति तेरो बारेमा यमुनासँग कुरा गर्दै थिई रे नि ! त्यो लेनिन काले भए पनि दिलवाले छ भन्थी रे !”
कुमारको कुराले मेरो होश उडायो । देव्रे हातको घाउ आलो भएर जुर्मुरायो । मुटु, फोक्सो, कलेजो एकैपटक उफ्रिएर कुद्न थाले । वरिपरि ‘तुम दिल की धड्कनमे’ गाना बज्न थाल्यो, ३०-३५ जना मेसैसँग नाच्न थाले । राधिकाले कम्मर मर्काउन थाली, म पनि रुमाल हल्लाउँदै नाच्न थालें । चराहरू हाँगामा बसेर गीतको भाकामा रमाउँदै कतिकतिखेर भुर्र उड्न थाले । अलि पल्तिर खोला आफ्नै गतिमा बग्न थाल्यो । बारम्बार राधिकाको भिजेको कपालले मेरो अनुहार छोपिन्थ्यो, पुच्छरे हाडदेखि फोक्सोसम्मका आन्द्रा तिनिक्क हुन्थे ।
कुमारलाई थाहा थिएन, उसले मेरो १८ वर्षे जिन्दगीको सबैभन्दा उल्लासमय र सुखद खबर सुनाएको थियो ।
“लेनिन काले भए पनि दिलवाले छ … ।”
राधिका र मेरो जुठो चल्थ्यो । जुठो चल्नु घनिष्ठताको प्रतीक थियो, हामी त्यही बुझ्थ्यौं । उसले मलाई र मैले उसलाई ‘तँ’ भन्थ्यौं । यही घनिष्ठताले मलाई उसको नजिक-नजिक पुर्‍याएको थियो । ऊ के सोच्थी- मलाई कहिल्यै थाहा भएन । म दिलवाले छु भन्नेसम्म ठान्थी होली शायद ।
सहर हुँदै कलेजसम्म भ्यालेन्टाइन्स डेको चर्काचर्की आयो । हरेक ठिटा त्यसको तयारीमा थिए । यो संसारमा भ्यालेन्टाइन्स डेले कसैलाई भित्रैसम्म छोएको थियो त त्यो म थिएँ । त्यही दिन मैले राधिकालाई ‘आई लभ यु राधिका’ भन्नेवाला थिएँ, कार्ड पठाएर ।
भ्यालेन्टाइन्स डे आयो । ४५ रुप्पेको कार्ड किनें र लेखें, “राधिका, गाली नगरेस् तर म तँलाई असाध्यै मन पराउँछु । आई लभ यु ।”
मध्यान्तरमा सबै बाहिर निस्किएका बेला मैले राधिकाको ‘रिडिङ बिटविन द लाइन्स’ किताबमा कार्ड घुसारें । यसको कक्षा मध्यान्तरअघि भएकोले कक्षामै खोलिहाल्ने सम्भावना थिएन, ऊ घर गएर खोलेपछि देखाजाला ! भोलिको दिन कसले देखेको छ र !
कलेज सकिएपछि अर्को दिन कलेज नलागुन्जेल म धेरैपटक मरेर बाँचें । धेरै पटक मेरो सास अड्कियो, धेरै पटक मेरो मुटुले काम गरेन । कतिकतिखेर दिमागले एउटा सोच्थ्यो, काम अर्कै हुन्थ्यो । भात खाने बेला चिया खान्थें, अचानक पेट दुख्थ्यो । दौडिएर ट्वाइलेट जान्थें, आधा घण्टाजति टोलाउँथें । यो एकदिन बाँच्दाबाँच्दै सिंगो एक जुनीबराबर भइदियो ।
डराउँदै कलेज गएँ । राधिकासँग आँखा जुध्छ भन्ने डरले कक्षा सुरु भएपछि छिरें र छैटौं लहरमा गएर बसें । शिवे तेस्रो लहरमै बसेर खुरुखुरु श्याम सरले भनेको सार्दै थियो । उसले हिजो राधिकालाई पर्पोज त गरेन ? मन फेरि एकपटक ढक्क फुल्यो । छेवैमा राधिका पनि आफ्नै गतिमा नोट सार्दै थिई । श्याम सर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा अक्षर पनि कानबाट छिरेन । बेलाबेला राधिकालाई छड्के हान्थें, कापीसम्म कपाल झार्दै र बेलाबेला फट्कार्दै सारिरहन्थी ।
त्यसपछि दुइटा अरु कक्षा आए, गए, मध्यान्तर भयो । म सबैभन्दा पहिले कक्षाबाट निस्किएर क्यान्टिन गएँ । कुनामा गएर एक्लै बसें ।
राधिका, यमुना र अरुअरु बिस्तारै क्यान्टिन छिरे । म घोसेमुन्टो लगाएर चाउमिन तान्दै थिएँ ।
“ओए, राधिकाले बोला’छे, जाऊ रे !” कानैमा आएर यमुनाले फुस्फुसाएर भनी, “मन दह्रो बनाएर जाऊ ।” अनि ऊ हाँसी ।
म लुरुलुरु क्यान्टिनको कुनामा गएँ, जहाँ राधिका मलाई कुरेर बसेकी थिई ।
कानकै नजिक आएर राधिकाले सोधी, “ओए, त्यो कार्ड तैले हाल्या होस् किताबमा ?”
उसलाई ‘तँ’ भन्ने कलेजकै एकमात्र केटो म थिएँ, चिन्न गाह्रै परेन ।
त्यसमाथि अक्षर मेरै- भनें, “अँ, हो ।”
त्यसपछि ऊ फन्की, “तँलाई बाँदर, मरेस् ।”
उसले बाँदर भनेपछि एकाएक मेरो पुच्छर पलाएझैं भो, रुख चढेर बेस्सरी हाँगा हल्लाएझैं भो । पुच्छर हल्लाउँदै नाकमा काउकुती लगाएझैं भो । उत्तिखेरै ‘तिमी मेरी सुन्दरी’ भनूँभनूँ झैं लाग्यो । डरले भनिनँ, भनेको भए जगल्ट्याउँथी । मभन्दा अघि प्रकाशलाई उसले धोइसकेकी थिई, बिनापानी ।
घरको ठ्याक्कै अघिल्तिर धारा । बिहान र बेलुकी टोलभरिका मान्छे झुम्मिने चियापसलजस्तो- जहाँ बिन लादेनदेखि इन्द्रेका बाउले सर्प मारेकासम्म गफ हुन्थे । इन्द्रेले खुसुक्क भन्थ्यो, “बाले यत्रो मार्थे सर्प, माछा मार्ने गड्यौला हुन् सप्पै ।” इन्द्रे यानेकि मेरो जिग्री, जसले भर्खरको कल्कलाउँदो मेरो वैंशमा अनेक फूलबुट्टा भरिदिएको थियो ।
धारामा पानी थाप्न आउने करिब २० जनामध्ये कम्तीमा १० जनाको अनुहारका भावभंगी हेर्नलायक हुन्थे । कसैले फोल्डिङ दाँत हालेका, कसैले कपालमा कालो मोसो दलेका, कोही नानी पाउन ठिक्क परेर ठस्ठस् कन्दै उभिएका । तीमध्ये कपालमा मोसो दल्नेवाला इन्द्रेका बाउ थिए, जो चौथी ल्याउने तरखरमा थिए । यसअघिका तिन्टी ल्याउने बेला प्रत्येक पटक उनले कपालमा त्यसैगरी मोसो दलेका थिए ।
इन्द्रे सुनाउँथ्यो, “बाले र्‍याक गर्छन् यार गट्ठी, छोरोलाई खोज्ने बेला आफैं टप्काउँछन् जैल्यै । बुढाले मेरो जवानीलाई लात हान्छन् ।”
बाउ कन्याराशि भएकैले इन्द्रे अलि रंगिलो थियो । बाउले आमाहरू कसरी पट्याउँथ्यो, उसले सबै तिकडम बुझेको थियो । सेतै फुलेको टाउकोमा मोसो दलेको एक हप्ताभित्र उसकी अर्की आमा आइपुग्थी । आमा भित्र्याइसकेपछिका केही दिन ऊ फरक मान्छे हुन्थ्यो । कहिले उपद्रै खुसी भएर केटाकेटी कुट्दै हिँड्थ्यो, कहिले आफैं कुटिन्थ्यो । अलि च्याँटि्ठने आमा परेकी बेला ऊ भन्थ्यो, “यसपालि माल गतिलो परेन यार ।”
इन्द्रेका बाउ इन्डियन आर्मीमा थिए । बाउ आर्मीमै हुँदा आमाले उसलाई छाडेर अर्को घरजम बसाएकी थिई । रिटायर्ड भएर फर्किएपछि बाउले अर्की स्वास्नी भित्र्याएको थियो । तर रक्सी खाने बानीले गर्दा उसलाई सबैले छाडेर गए । रक्सीले टुन्न भएर ऊ धेरैपटक कटुवा खोलाको बगरमा चङ्ग्रङ्ग उत्तानो परेको भेटिन्थ्यो । कपाल फुले पनि मन फुलेनको थिएन, एउटी गए अर्की ल्याउँथ्यो ।
‘प्लेब्वाई’ बाउले सुनाएका रंगिला गफ इन्द्रले मलाई क्रमैसँग बताउँथ्यो । एउटी आमा भागेपछिको दुःखभन्दा अर्की कस्ती आउने हो भन्नेमा ऊ चिन्तित हुन्थ्यो ।
“यसपालि गतिली आमा आइनिन् भने त नेपालगन्जतिर जान्छु गट्ठी म,” ऊ भन्थ्यो, “राम्री परिन् भने तँलाई दुई पिलेट सुकुटी ख्वाम्ला, बुटोल रेस्टुरेन्टमा ।”
गाउँ, टोल, सहर सबैतिर चहार्ने हुँदा उसलाई हरेक घरका खबर थाहा हुन्थ्यो । सबैभन्दा बढी कसले कसलाई भगायो भन्नेमै उसको चियोचर्चा केन्दि्रत हुन्थ्यो ।
उसको संगत मेरो लागि बिन्दास टाइमपास थियो । एक्सनबाहेक कुनै फिल्मले नतान्ने मलाई उसले हलमा गएर लभस्टोरी हेर्ने बानी बसालेको थियो ।
अनि गीत गाएर हिरोइनलाई वशमा पार्ने हिरोजस्तै ठान्दै गएँ आफूलाई । हरेक भावभंगीका हिरोको सधैं एउटीमात्रै हिरोनी हुन्थी, राधिका ।
बेलुकी धारामा पानी थाप्न आउँदा इन्द्रेले चिच्याउँदै गाउँथ्यो-
“लाइदेऊ, लाइदेऊ माया लाइदेऊ, हे संगीता ! हे संगीता !”
यो गीत सुनेर संगीताले धारे हात लगाउँथी, “साले कुत्ता, मर्लास् … !”
इन्द्रे खितीतीती गर्दै कुलेलम ठोक्थ्यो ।
डल्लो अनुहार, कालो कपाल, त्यसमाथि हाइलाइट गरिएका आठ-दस वटा धर्का । गुलाबी सुरुवाल कुर्ता लगाएर बेलुकी ५ बजे संगीता धारामा आउँदा धेरैको ध्यान भंग हुन्थ्यो । इन्द्रेका बाउ, पसले प्रेमदाइ, ठेक्दार ध्रुव सबै चनाखो हुन्थे । अघिसम्म छट्टाएर गफ हाँकिरहेकाहरू संगीताको आगमनसँगै गम्भीर हुन्थे । उनीहरूको हाउभाउ देख्दा लाग्थ्यो- सबै संगीता भित्र्याउने दाउमा छन् ।
दाहिने कम्मरतिर खाली गाग्री लिएर संगीता धारामा आउँदा म दौडिएर घरको छतमा जान्थें, पढ्ने बहानामा ।
इन्द्रे बाउसँगै धारैमा हुन्थ्यो धेरैजसो । संगीता मस्किएर गफ गर्थी सबैसँग, त्यै बहानामा इन्द्रेसँग पनि मस्याकमुसुक गर्थी । इन्द्रे घरिघरि संगीताको नजिक पर्न खोज्थ्यो, बाउले आँखा सन्काएर आफूतिर बोलाउँथे । मलाई थाहा थियो, इन्द्रले जिस्काए पनि संगीताप्रति उसको भावना थिएन ।
सबैले पानी भरिसकेपछि संगीताले बडो सम्हालिएर गाग्री थाप्थी र भरेर थपक्क कम्मरमा राख्थी । कम्मरको डिलैमा गाग्री अडेस लागेर अँगालो पथ्र्यो । भरिएको गाग्री कम्मरमा ढल्किँदा तपतप पानी चुहिन्थ्यो र सुरुवाल छपक्कै हुन्थ्यो ।
उसले त्यसरी पानी थापेको, गाग्री अड्याएको र सुरुवाल भिजेको मलाई खुब मन पथ्र्यो । कहिलेकाहीँ छततिर हेरेर मुसुक्क हाँस्थी । उसको मुस्कान बतासले मछेउ ल्याउँथ्यो, समाएर थपक्क छातीको देव्रे कुनामा राख्थें । मन त्यसै खुसीले पुत्ताउँथ्यो ।
एकदिन इन्द्रेले सुनायो, “संगीता त नछुनी जातकी हो रे, बाले छेउ नपरेस् भन्या’छन् ।”
मलाई विश्वास लागेन, त्यस्ती रूपवती संगीता कसरी नछुनी हुनसक्छे ?
“तेरा बाउले जाँड धोक्छन्, जसलाई पनि जेप्पायो त्यै भन्छन् । सधैं हावा कुरा गर्छन् ।”
“हैन के, एकराजकी आमाले नि त्यै भन्थिन्, छुन हुन्न रे हाम्ले !”
मलाई रिस उठ्यो । ‘क्रान्तिवीर’ फिल्ममा नाना पाटेकरले भनेको डाइलग याद थियो, भनिदिएँ, “जसका बाउले, जसकी आमाले जे भने पनि मान्छेको रगत रातो हुन्छ । रगतै रातो भएपछि को सानो को ठूलो ?”
इन्द्रे ट्वाँ पर्‍यो ।
त्यसपछि पनि हरेक दिन संगीता सधैं गुलाबी सुरुवाल कुर्तामा धारामा आइरही, मैले छतमा गएर हेरिरहें ।
कुमारको भाउँतोमा लागेर देव्रे हातमा लेखेको ‘आर’ आलै थियो । इन्द्रेलाई कलेजका सबै घटना बेलुकी सुनाउँथें, ऊ रमाउँथ्यो ।
राधिका मसँग बोली ।
राधिकाले नोट मागी ।
राधिकाले माया गरेर ‘काले’ भनी ।
यस्ता गफ सुन्दा इन्द्रे रल्ल पथ्र्यो । कतिपटक त उसले पनि भन्थ्यो, “राधिकालाई चिठी लेख्, म पुर्‍याइदिन्छु । उसले फर्काइदिई भने नाम फेरेर संगीतालाई दिम्ला । कसका बाउको के जान्छ र ए गाँठे !”
म मरीमरी हाँस्थें । मलाई हँसाउन सकेकोमा ऊ पनि दंग पर्थ्यो ।
राधिकासँगको घनिष्ठता र संगीतासँगको दूरी- दुवैबीचको भेद म खुट्याउन सक्दिनथें बेलाबेला । दिउँसो कलेज जाँदा राधिकाबिना बाँच्न नसक्ने हुन्थें, बेलुकी धारामा संगीतालाई देख्दा मन कटक्क काट्थ्यो । घुँडासम्म फ्रक लगाएर बारुली कम्मर भाँच्ने राधिका राति सपनामा आउँथी, उत्तिखेरै रुप फेरेर संगीता बन्थी ।
संगीता पनि – सपनामै सही – धेरैपटक मेरो घर आई, मलाई घुमाई, आमालाई सघाई । ऊ पनि मेरो साइकलको पछाडि बसेर बाह्रकुने दह घुमी । साइकलमा बस्दा पछाडिबाट चपक्क समाउँथी, मलाई काउकुती लाग्थ्यो । र, ढुक्क हुन्थें- यतातिर शिवे थिएन, उसको बाइक थिएन ।
त्यस्तो समय पनि आयो, जतिबेला राधिका र संगीता को मेरी हो खुट्याउन सकिनँ ।
म दोबाटोमा थिएँ- एकातिर राधिकाको मायाले बोलाउँथ्यो, अर्कातिर संगीताको वैंशले ।
र, भ्यालेन्टाइन्स डे आयो- फेब्रुअरी १४ मा । कुमारको आँटले फुरुंग थिएँ ।
बजार गएँ, ४५ रुप्पेका दुइटा कार्ड किनें पानको पात आकारमा काटिएका ।
एउटामा लेखें, “राधिका, गाली नगरेस् तर म तँलाई असाध्यै मन पराउँछु । आई लभ यु ।”
अर्कोमा लेखें, “संगीता, नरिसाए है, म तिमीलाई असाध्यै मन पराउँछु । आई लभ यु । मलाई जातभात मन पर्दैन ।”
दिउँसो कलेजको क्यान्टिनमा राधिकाले ‘बाँदर’ भनेपछि म केही बोलिनँ । साला आँसु पनि झरेन । लाग्यो- अब राधिका कहिल्यै मेरी हुन्ने । मलाई माया गर्थी त किन रिसाएर बाँदर भनी ? बरु अलि समय कुरेको भए आफैं पो चिठी लेख्थी कि !
हर्नोकको डाँडोमा नाचेका सबै रिल फ्ल्यासब्याक भएर मनभरि नाच्न थाले ।
तर, आशा मरेको थिएन, इभिनिङ सिफ्ट त बाँकी नै थियो । संगीताले ‘आई लभ यु टु’ भन्ने सम्भावना पनि त छ नि !
संगीतालाई कार्ड दिने जिम्मा इन्द्रेको थियो । कुरामा जति फट्याइँ भए पनि इन्द्रे मभन्दा बढी लद्दु थियो । त्यसमाथि कहिल्यै केटीको फेला नपरेको मान्छे !
“सक्छस् यार तैले, नडरा,” मैले भरोसा दिँदै भनें, “रिसाइछ भने लेनिनले दिएको हो भनेर टाप कसेस् ।”
परिवार क्रिश्चियन भएकाले सबै चर्च गएका थिए । त्यही मौकामा इन्द्रेले संगीताको हातमा कार्ड थमाएर भागेछ, केही नबोली ।
दोस्रो दिनसम्म कुनै उत्तर आएन । राधिकाको गाली सुनेपछि यसै पनि मेरो मन ठेगानमा थिएन । अरु जे भए पनि ‘बाँदर’ भनेर गाली नगर्नुपर्ने । खुरुक्क ‘आई एम सरी, बट मैले तँलाई मन पराउन्नँ’ भनेको भए पनि त हुन्थ्यो !
‘बाँदर’ले धेरै बेरसम्म चस्काइरह्यो ।
तेस्रो दिन बिहानै इन्द्रे चिटचिट पसिना निकाल्दै आयो । र, झ्याल बाहिरबाट सुस्तरी भन्यो, “ओए, ह्याँ आ त, बर्बाद भो बे !”
‘बर्बाद’ भन्ने शब्दसँगै मेरो हंशले ठाउँ छोड्यो । लाग्यो- संगीताले पनि धोई क्यार !
“के भो ?”
“ला हेर् त स्याला, क्या केटी हो यार !”
हत्त न पत्त उसको हातबाट चिठी तानेर हेरें ।
चिठी देखेर दुइटै कान एक्कासि बम्म भए- पानीभित्र डुब्दा हुने सन्नाटाजस्तो । भित्रभित्रै नशामा असारे भल बगेजस्तो गह्रुंगो भयो । आँखा धमिला भए । रुद्रघण्टीनेरै आएर सास अड्कियो ।
संगीताले लेखेकी थिई, “आई लभ यु टू, इन्द्र । जातभातको कुरा मन पर्दैन भन्यौ, खुसी लाग्यो ।”
त्यसको धेरै बेरसम्म इन्द्रेको मुखमा हेर्न सकिनँ । भर्खरै उदाउन लागेको सूर्यले पनि भत्भती पोलेजस्तो लाग्यो ।
विलियम सेक्सपियरले कतै लेखेका थिए, “नाममा के छ र ?”
तर, नाममा धेरैथोक हुन्छ ।
मैले कार्डमा त्यही नाम छुटाएछु !!
(अजित बरालद्वारा सम्पादित ‘फस्ट लभ’ नामक पुस्तकको अंश । यो पुस्तक फाइन प्रिन्टले बजारमा ल्याएको हो ।)